OB / GYN Columbus, OH Dr. Alexandra Schueler
Alexandra Schueler, MD
La kulan Dr. Alexandra Schueler
Alex Schueler, MD waxay ku biirtay Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka bishii Ogosto 2020. Waxay ku faraxsan tahay inay ku laabato Columbus, magaaladeedii, 8 sano ka dib Akron, Ohio halkaas oo ay ka heshay Doctorate of Medicine kana qaadatay Northeast Ohio Medical University oo ay ku dhameystirtay degenaanshaha Summa Health. Nidaamka.
Meelaha tababarka ee Dr. Schueler waxaa ka mid ah umulisooyinka caadiga ah iyo kuwa halista badan leh, qalliinka dumarka oo ay ku jiraan robotikada, laparoscopy, hysteroscopy, colposcopy, iyo caafimaadka haweenka ka hortagga ah.
Dr. Schueler waxay dhigatay Jaamacadda Ohio State University iyada oo ku qaadatay waxbarashadeeda heerka koowaad. Iyadu waa qof jecel ciyaaraha Buckeye waxayna ku raaxeysataa ka qeybgalka dhacdooyinka isboorti iyada iyo qoyskeeda iyo asxaabteeda. Waxay hadda ku nooshahay Upper Arlington.
Haddii aad uur leedahay, qaado ilbiriqsi si aad u aqriso su'aalaheena had iyo jeer la isweydiiyo ee ku saabsan isbeddelada jirkaaga ku dhici karo.
Galmada Inta Uurka Leedahay
Galmada waa la oggol yahay waqti kasta inta lagu jiro uurka illaa aad ka hesho dhiig bax siilka ah, ama u janjeera foosha dhicis ah.
Qiiqa sigaarku wuxuu ka kooban yahay sunooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin nikotiin, cyanide, iyo kaarboon monoksaydh, kuwaas oo dhammaantood ka gudba mandheerta una taga ilmaha.
Toxoplasmosis ee Haweenka Uurka leh
Toxoplasma waa dulin waxyeello leh oo sababi kara cudur loo yaqaan toxoplasmosis. Waxaa kale oo laga qaadi karaa hooyada ilaa cunuga inta ay uurka leedahay.
U heellan caafimaadka haweenka, Dr. Schueler waxaa si aad ah loogu tababaray qalliinka dumarka, oo ay ku jiraan robotikada, hysteroscopy, daryeelka ka hortagga, iyo dhalmada.